Amụma Nzuzo Izugbe - Bromley, Lewisham & Mindwich Mind
Ị nọ ebe a: Mbido > General Nzuzo
Anyị chọrọ ka onye ọ bụla bịakwutere anyị maka nkwado, ndị na-enye onyinye, ndị na-eweta anyị, ndị ọrụ anyị na ndị ọrụ afọ ofufo anyị nwere obi ike banyere otu a ga-esi lebara anya wee jiri nkọwa ọ bụla ha kesara.
Iwu a na-enye ozi gbasara ozi anakọtara, otu esi eji ya na otu anyị si elekọta ya.
Anyị ga-anakọta, chekwaa ma jiri ozi ọ bụla ị nyere dịka Iwu Nchedo Data 1998 na Ntuziaka Nchedo Data General 2018 (GDPR). Anyị ga-anwa idebe data ahụ dị ka ihe ziri ezi ma dị ọhụrụ dị ka o kwere mee ma agaghị edebe ya ogologo oge karịa ka ọ dị mkpa. N'oge ụfọdụ iwu na-esetịpụ ogologo oge a ga-edebe, mana n'ọtụtụ ọnọdụ Bromley, Lewisham & Greenwich Mind ga-eji ezi uche ya hụ na anyị anaghị edebe ihe ndekọ karịa ogologo oge.
2. Ozi Anyị Na-anakọta Banyere Gị
Ozi anyị ga-anakọta ga-abụ data nkeonwe, ụfọdụ n'ime nke a nwere ike ịbụ nkewa dịka data otu pụrụ iche.
Gbanwere n’okpuru Usoro Nchedo Data 1998, akọwapụtara Personal Data dị ka data na-achọpụta mmadụ dị ndụ yana / ma ọ bụ tinye echiche ọ bụla gbasara onye ahụ. Data nkeonwe anyị nwere ike ịnakọta n'aka gị nwere ike ịgụnye nkọwa ndị bụ isi dị ka aha gị, ụbọchị ọmụmụ gị, adreesị ozi-e, adreesị ozi-e na akara ekwentị. Ọ nwere ike ịgụnye ozi ọ bụla gbasara gị na faịlụ anyị metụtara ọrụ anyị ọ bụla enwere ike ịghara gị ma ọ bụ nweta gị.
Pụrụ iche Atiya Data
Ejiri ụfọdụ data dịka data Pụrụ iche. Dịka ọmụmaatụ, agbụrụ ma ọ bụ agbụrụ, okpukperechi ma ọ bụ nkwenkwe ndị ọzọ nwere ụdị okike, ọnọdụ ahụike ma ọ bụ nke ọgụgụ isi na mmekọahụ. Ejiri ya dị iche iche n'ihi ọdịdị ya dị nro.
3. Otu Anyị Si Eji Ozi Gị
Anyị ga-eji ozi ị nyere anyị rụọ ọrụ anyị, nke gụnyere n'etiti ndị ọzọ, ebumnuche ndị a:
ịhazi ma nyefee ọrụ
iji mepụta onye nkwado kwesịrị ekwesị maka ịkwado atụmatụ gị na mkpa gị
ijikọta ọrụ nke ọma na ọrụ ndị ọzọ maka abamuru gị
iji nyere aka chebe gị ma ọ bụ ndị ọzọ pụọ na mmegbu ma ọ bụ nsogbu
iji nyere gị aka ịhazi ma nata ọrụ mgbe ọ dị mkpa
nke mere na ndị na-ahụ maka mpụga, ndị nyocha na ndị na-akwụ ụgwọ nwere ike ịlele ma nyochaa ọrụ anyị ma hụ na ha mezuru ụkpụrụ achọrọ
ka anyị nwee ike inyocha, nyocha ma melite ogo nke ọrụ anyị ma bulite abamuru ha na gị na ndị ọzọ
ka anyị wee nwee ike hụ na ọrụ anyị nwere ike ịnweta n'akụkụ niile nke ọha mmadụ
na-ebu ibu ọrụ anyị nye ndị ọrụ na ndị ọrụ afọ ofufo
ịkpọtụrụ ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ ndị ọzọ gbasara ntụgharị na ọrụ anyị na-enye
ikwado nkwalite nke ọrụ anyị na nchịkọta ego.
4. Shakekọrịta Ozi
Anyị ga-ekekọrịta ozi n'etiti ndị otu ọzọ naanị ebe anyị gwara gị na anyị ga-eme ya (dịka ọmụmaatụ soro nzukọ ibe gị), ebe iwu kwadoro anyị ime nke ahụ (dịka HMRC), ma ọ bụ ebe anyị nwetara nkwenye gị ịme (dị ka GP gị).
N'ọnọdụ ụfọdụ, enwere ike ịnwe oge ọ dị mkpa iji kesaa ozi na-enweghị nkwenye gị na ụlọ ọrụ ndị ọzọ dịka iwu nke BLG Mind, iwu nkịtị na Iwu Nchedo Data 1998 dị ka o kwesịrị. Iji maa atụ, n'ọnọdụ ebe ekwesiri igosipụta ihe ziri ezi maka ọdịmma ọha na eze dịka iji kpuchido gị ma ọ bụ onye ọzọ pụọ na mmerụ ahụ. N'ọnọdụ ndị a, a ga-edebe ihe ọmụma a na-ekenye ka ọ dịkarịa ala. Ọ bụrụ na anyị mee nke a, a ga-agwa gị onye anyị kesara ozi na ihe kpatara ya.
5. Nnabata na General Data Protection Regulations (GDPR)
GDPR chọrọ ka anyị nwee usoro iwu kwadoro maka ijide data gị nke anyị kwesịrị ịgwa gị. Maka ụdị edemede pụrụ iche anyị ga-ezute otu n'ime ọnọdụ pụrụ iche. Enwere ọkwa nzuzo dị iche maka ọrụ anyị ọ bụla na mpaghara ọrụ ọ bụla na-akọwa nke metụtara data gị. Enwere ike ịchọta ha na ngalaba dị mkpa nke weebụsaịtị anyị.
Idobe ozi nkeonwe gị dị ezigbo mkpa nye anyị. Anyị emejuputa usoro kwesịrị ekwesị nke anụ ahụ, teknụzụ na nhazi iji kpuchido ozi anyị jidere site na nnweta na-ezighi ezi, ojiji, ngbanwe, mbibi na ọnwụ.
7. Ikike ịnweta
I nwere ikike, n'okpuru Iwu Nchedo Data, ịrịọ otu ozi a na-ejide maka gị. A maara nke a dị ka arịrịọ nnweta isiokwu.
A ga-ederịrị arịrịọ nnweta Isiokwu na ide (arịrịọ email na-anabata) ma enwere ike ịnweta ego Anyi choro ka anyi nye ihe omuma a n’ime otu onwa, belụsọ na o di mgbagwoju anya ma obu anyi anata otutu aririo n’aka gi, n’ime otu a anyi nwere ike igbati oge a rue n’onwa abuo.
Ihe ndi ozo nke ato, ya bu site na ndi insurers ma obu ndi oka iwu, gha esonye ya na nnabata nnabata nke emere n’ime onwa isii gara aga.
8. Ikike ịrịọ maka mmezi na nhichapụ (rịọ ka echefuru gị)
I nwere ikike ịjụ anyị ka anyị mezie ozi ọ bụla anyị jidere gị, nke ị kwenyere na ọ zighi ezi.
I nwere ikike ịrịọ ka echefue gị, nke pụtara na data ọ bụla anyị jidere gị ga-enwerịrị aha ya ka a ghara ịmata ya dị ka nke gị. Agbanyeghị ịme nke a ga-apụta na anyị enweghị ike ịnye gị ọrụ yana ọ bụrụ na ịchọrọ ọrụ n'aka anyị n'ọdịnihu anyị agaghị enwe ike ịnweta ndekọ akụkọ ihe mere eme gị.
9. Weebụsaịtị anyị
Akụkụ a nke iwu na-akọwa otu anyị si echekwa ma jiri data metụtara weebụsaịtị, ozi dị a whataa www.blgmind.org.uk (a na-akpọ 'weebụsaịtị a') na-anakọta na otu nzukọ, Bromley, Lewisham & Greenwich Mind (nke akpọrọ 'anyị', 'anyị' na 'nke anyị') ji ozi ahụ.
9a. Secdebe njikọ gị na weebụsaịtị anyị
Weebụsaịtị a na-eji SSL (Secure Sockets Layer) akwụkwọ nchekwa iji zoo ma kpuchido njikọ na okporo ụzọ na weebụsaịtị. Mgbe ị nọ na ebe nrụọrụ weebụ a, na adreesị mmanya nke ihe nchọgharị weebụ gị, ị ga-ahụ ma ọ dịkarịa ala otu n'ime ndị na-esonụ iji kwado njikọ dị nchebe na weebụsaịtị a:
Ederede 'https: //; tupu adreesị weebụ
Okwu 'Secure Connection'
Ọ bụ onye ọbịa na weebụsaịtị a iji hụ na ngwaọrụ ha na ngwanrọ na emelitere na nsụgharị ọhụrụ iji bulie nchebe.
Weebụsaịtị a na-eji kuki iji:
nyere anyị aka ileba anya ma ghọta etu ndị mmadụ si eji webụsaịtị
mata ndị na-alọta ma ọ bụ megharịa ndị ọbịa
jikwaa nchekwa nke weebụsaịtị a
jikwaa ndị na-abanye or pụọ na weebụsaịtị.
Nwere ike igbochi kuki ndị a site na iji desktọọpụ kwesịrị ekwesị na ngwa mkpanaaka maka ngwanrọ na sistemụ gị.
9c. Olee otu ndị ọbịa si eji weebụsaịtị a
Anyị na-eji Google Analytics na usoro mkpado peeji iji ghọta otú ndị ọbịa si eji weebụsaịtị a.
Chọpụta ozi ndị Google nakọtara, otu o si eji ma chebe ozi a Ebe a. Njikọ ahụ na-enyekwa ozi gbasara otu ị ga-esi pụọ na nchịkọta Google.
Nchịkọta Google na weebụsaịtị a nwere ike ịnakọta ozi dịka:
adreesị IP ndị ọbịa, ihe nchọgharị weebụ, ngwaọrụ (s) ejiri
otu ndi mmadu siri bia na webusaiti anyi, oge ejiri na ibe web
ma onye ọbịa abanyela na mpaghara amachibidoro weebụsaịtị
ọ bụrụ na onye ọbịa abịa na weebụsaịtị n'oge na-adịbeghị anya.
Ozi a nyere anyị aka:
gbaa mbọ hụ na weebụsaịtị anyị zutere ndị ọbịa na teknụzụ
mara ma anyị na-enye ozi ịchọrọ ma ọ bụ chọpụta na ọ bara uru
jiri ihe ọrụ ebere anyị mee ihe nke ọma iji kwalite ihe anyị na-eme ma kwado ndị chọrọ ọrụ anyị.
9d. Kpọtụrụ anyị site na weebụsaịtị
Anyị nwere ike iji aka gị mata gị ma ọ bụrụ na ịhapụ okwu, nyefee ụdị ma ọ bụ pịa njikọ email mgbe ị na-eji weebụsaịtị. Nke a gụnyere ozi dịka aha gị, adreesị IP, adreesị ozi-e, akara ekwentị na ozi ọ bụla ị nyere anyị. Anyị na-anwa idebe ozi anyị na-anakọta na opekempe dị mkpa iji nye anyị ohere ịzaghachi nzaghachi gị, ozi, nkọwa ma ọ bụ ajụjụ.
9e. Cribdenye aha na Emailma Ọkwa Email, Akwụkwọ Akụkọ na Mmelite
Anyị na-enye ndenye aha email na akwụkwọ akụkọ anyị, ahịa, nchịkọta ego na mmelite banyere ọrụ anyị.
Naanị anyị na-ajụ maka aha mbụ gị na adreesị ozi-e na ị nwere ike wepu aha gị n'oge ọ bụla site na iji njikọ dị na ala nke ozi ịntanetị ị nwetara. A ga-eji ozi ị nyere anyị naanị maka ebumnuche ndị dị n'elu ma ọ gaghị ere ma ọ bụ gbazite ya na ndị ọzọ, ndị otu ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Anyị na-eji ndị na-enye email ndị ọzọ maka ọrụ a. Companylọ ọrụ ahụ na-enye ọrụ nchebe echedoro yana iwu nchekwa data dị mkpa. Na mgbakwunye na izipu ozi ịntanetị, ha na-enye nyocha maka anyị dịka ọnụọgụ pịa, ọnụego emeghe, ịkekọrịta na mbugharị ozi ịntanetị anyị natara n'aka anyị. Nke a na-enyere aka ijide n'aka na anyị na-enye ozi dị mkpa ka ndị mmadụ na-edebanye aha ma tụọ ịdị irè nke ahịa na nkwukọrịta anyị.
10. Kpọtụrụ anyị
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu, ma ọ bụ nwee nkụda mmụọ gbasara etu esi ahazi ozi gị, ma ọ bụ chọọ ịrịọ nnweta isiokwu, biko kpọtụrụ:
11. Ikike iwebata akwụkwọ mkpesa
Ọ bụrụ na oge ọbụla ị chere na nsogbu dị n'ụzọ anyị si eji data gị eme ihe, ị nwere ikike ime mkpesa nye anyị site na usoro mkpesa anyị na-arụkarị, enwere ike ịchọta nkọwa ya na weebụsaịtị anyị blgmind.org.uk, ma ọ bụ site na email ka Data.Controller@blgmind.org.uk
I nwekwara ike ịkpọtụrụ Office Commissions Office ozugbo na www.ico.org.uk
Emelitere November 2020